RAVELOSON CONSTANT : Chissano no mpanakorontana – MyDago.com aime Madagascar
RAVELOSON CONSTANT : Chissano no mpanakorontana
Miala amin’izay hoy ny antsoantson’ny vahoaka teny amin’ny Magro Behoririka androany miantso ireo parlemantera tonga teny an-toerana. Ny Ct Raveloson Constant no niantefan’izany voalohany ka dia namaly avy hatrany. Efa re izay hoy izy , tonga any amin’ny filoha Ravalomanana, Ramatoa Lalao Ravalomanana izay. Soa ihany hoy izy fa izaho no ataonareo izay, fa ny tenako MFM. Ny filoha Ravalomanana hoy Constant no nifanarahanay, noho izany dia samy miandry isika baiko mazava sy hentitra avy aminy. Tsy mila hoe izao no teniny. Ilaina miteny ny filoha Ravalomanana fa izahay tsy sarotiny alohan’ny tompony. Aleo izy tompony no hiteny ary hiteny mazava tsara hoe mbola paipaika ity miala ianareo, mijanona ianareo. Raha olona mangidihidy rehetra izao hoy izy no miseho ho tompony ny tolona ankoatra ny filoha Ravalomanana , dia tsy misy mankatoa izany fa tsy izy no imatimatesanay teto. Miandry ny teny avy amin’ny prezidà izahay hoe miala amin’izay, avy amin’ny Ramatoa Lalao Ravalomanana fa izy no maha eto anay. Misy dingana vaovao hafa indray hoy Constant izao tolona izao. Iza moa nieritreritra fa hanaiky an’io CES io hoy ny fanontaniana napetrany? Saingy efa nampoizina fa isika tsy tampin-dalankaleha.Hadisoan’izay mieritreritra hoy izy hoe ireo fa tampin-dalankaleha. Tsotra ny antony fa fomba iray ahitana iny, fa ny tondrozotra no ahitana valiny amin’ny filoha Ravalomanana fa tsy hoe miala sy tsy miala fotsiny. Mety miala isika hoy izy fa ny andininy faha 20 ve mbola atao ka izy tompony no aoka hanazava. Tsy izahay hoyity mpanao politika ity no sanatria nandeafa azy sesi-tany faisika no hanao hoe ampodio androany dia androany izy. Izy tompony no mahalala ny fanapahana momba ny tenany ka rehefa izy no miteny dia tsy misy manampankevitra amintsika ireo. Na izany aza hoy izy dia ny tolona dia mitohy na ny ao anatiny na tsy ao, tsy maintsyhitantsika ny fomba hanohizana io na ny fitaovana, na ny olona. Ny fantatra hoy Constant dia miady amin’ny vazaha isika amin’ity indray mandeha ity, ny vazaha no tena fahavalo fa ny adiadintsika samy isika avelao any. fa tsy natao handravana ny tolona izany. Chissano hoyizy dia karazan’olona mikarama manao iraka.Ambarako hoy izy fa mody any Bokinafaso no alefany ny fanalam-baraka ny kandidantsika. Inona no fantatry Bokinafaso amin’ny raharaha aty amintsika fa izy ary taty amintsika no niananatra. Nanalam-baraka hoe ireto olona ireto Didier Ratsiraka, Rajoelina, indrindra i Neny hoe olona tia tena , tsy mahalala afa-tsy nytenany, mampahory ny malagasy tsyhampadeha ny fifidianana. Izay no aelin’i Chissano any amin’ny RFI. Bokinafaso hoy izy dia anisan’ny nanelanelana ary nahatonga ny andevon’ny frantsay ho filohan’ny Mali amin’izao fotoana izao.Olona mpiandany amin’ny mpanongam-panjakana, ary rehefa voafidy izy dia ilay kapiteny no nataony jeneraly, izany no maodelin’i Chissano. Izao hoy ity olomboatendry ity no hadisoana lehibe ho an’ny Sadc fa diso fiantefa ny fitokisana amin’i Chissano. Izy dia nandrombaka fahefana tamin’ny basy sy tafondro, niady tamin’ny portugais. Rehefa nandray fanjakana tao Mozambika ry zareo dia nitazoniny tamin’ny hery ary antoko tokan-dryzareo ihany no nahazo nanao politika. Izay mahery manana basy no omena rarinyhitondra ny tany sy ny firenena, ka izay no ataony amintsika io. Rehefa niteny izy hoe rehefa vita ny fifidianana vao atao ny fampihavanana dia tahaka ny nataony tany aminy, riato sy pepoy aloha izay vao mihavana. Tsy ilay maodeliny mihitsy no tsy mety amintsika malagasy fa efa tsy izany intsony. Efa malalaka ny eto fa tsy antoko tokana intsony.Miverina miady amin’ny vazaha isika izao. Henjana izao misy antsika izao hoy Constant kanefa soa lavo hahay hamindra, soa fa nipoitra izao devoly izao, izay mamendrofendro anay. Ialahy no nanakorontana fa rehefa nipoitra ny kandidà 41 , tsy nisy malagasy iray nimenomenona teto.
RAVELOSON CONSTANT : « Tohizo ny tolona hoy prezidà «
Auteur Solo Razafy*Publié le 22 août 2013 Catégories Politique
10 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : Chissano no mpanakorontana »
NY VAVA T@ FIFIDIANANA NY REFERENDUM ny constitution an i Rajoelina tsy vitan ny Mouvance ny Nibloke azy ?dia aty ariana dia manaiky io constitution io ny mOUVANCE.
dia hoy i RIVO hoe dia ho hita eo @ 25 octobre patati patata dia …hisy ny fifidianana dia i Rajoelina indray ho vice président ho …dia …eny indray hoy ny mouvance .
NY HILAINAY VOLAM BAHOAKA NO MAMELONA NAREO ,Ka hilaina ianareo na mi demissionnina na tsia Dia hanao ny DESOBEISSANCE ,BLOCAGE NY ADMNISTRATION DIA MITARIKA NY VAHOAKA …MILA HETSIKA MAVITRIKA NY VAHOAKA R I CONSTANT,RIVO ,MARC Ravalomanana o!!!!!
O!RIVO O! EFA TAONA NO NAMPANANTENAIN NY MOUVANCE NY VAHOAKA ….IO NY POLITIKAN NY COLON ATRANY NO TAFITA …HIALA IZAHAY HOY NY TFIDITRA SYSTEME RAHA VOAHENDAKA NY CANDIDATURE RATOA RAVALOMANANA ..IO MIANAHANA INDRAY R I CONSTANT SY NY REHETRA.
nY MAHAGAGA DIA MISY TOKOA NY MODY ADALA ? KA MODY TSY MAHAFANTATRA NY SEH-javatra eto amin’NY fIRENENA .
tsy misy ifanomezan-tsiny..Olon-dehibe Isika ary afaka mandinika..
Amiko dia tsy tampina ny daomy, ary mbola mitohy ny fanorona !
Eo amin’ny fifaninana dia misy ireo maharesy nefa tsy zakany ny fandresena ,tsy hainy izay atao , ary toa mangetaheta ambony lakana aza !
Ny ces faharoa namono ny ces voalohany , iza no hilaza fa tsy hist ces fahatelo ,hamafa ny ces faharoa..
Ireo mpifanina notazonin’ny ces faharoa anie misy olona ao antin’ny 109 voasazy !
Mbola ny olana mipetraka ary tsy ireo no singanin ireo no haneme filohan’ny Firenena mahay ,kinga ary madio tanana !
Mbola tapitra ny ny ady ..ny diavolan-ko lava ,ny kilalolao mbola ho ela !
Raha miray moa izy telo lahy nifandimby nitondra ny firenena 2001-2009-2013 ,dia inona y tranga ?
Mangina no mety..
Avelao ny sahona hikiakiaka , fa ny rano ary maro anie ny tompon’ny rano no sady mahay milomano !
Fa inona ry zareo no tsy hilanjana sora-baventy eo anoloan’i
hotel hipetrahan’ i Chissano ???ROAHANA TSOTRA. IZAO FA TSY MILA
GENA MPAMPIADY ANGELY.tsy hitondra vahaolana fa vao maika hanampy ny olana efa misy.
hitady ny tombo-tsoany fotsiny no hakehany eo.
Rehefa hitany koa isika fa tsy mihetsik dia mihevitra izy fa izy no tena VAZAHA BE ANIE KA HO
LOLOAVINA sy harahana eo daholo ny teniny e!!!
Amiko koa aloha dia tsisy fifidianana eo rehefa tsy misy antoko mpanohitra eo eo e!!!NENY na DADA
na ny ZANANY ary mitondra ny anarana RAVALOMANANA raha te ho afaka isika.
23 août 2013 à 3 h 37 min
Aoka ianareo anaty mouvance hiray hina SOLIDARITE
Efa vita ity ny fanadinana bacc an’ny zatovo
mila hasiana action amin’izay kosa k’ity
NE TIENS POINT DEBOUT UNE SUPPOSITION DE 6 (SIX} MOIS
étant donné que la date exacte des soidisant éléctions présidentielles n’est prononcée
for sure WHEN???
[MITOTOREBIKA NY VOANJO
MISOMEBISEBY NY MAINTY
MODY TSY MILOA-BAVA NY SARIOLONA
MODY MILAZALAZA FAHENDRENA NY MENARANA
TOA MIARAHABA TENA NY MPITSARA TSY MARINA
23 août 2013 à 6 h 47 min
« Comments are closed » no hita raha tia avy namaky ny nolazain’i Guy Rivo.
Fa misy inona satria vao omaly ny daty ?
Chissano no alefany renindozatra handrebireby ireo marivo saina mitonona ho mpitari-tolona anefa miara miasa @ domelina izay saribakoliny frantsay.
Ka rehefa tsy ny fototra no harodana dia eo ihany ny loza e: manjary misaina toa DOKOTERA AMINY PARACETAMOL fosiny anie e!
Mahakivy, Mahonena…tsy ampy intsony ny fiantso mazava ny miseho…
Mitrakà: marina tokoa io fa hitraka irery eo anivony firaisambe ny mpamitaka vozongo sy gasy voavidy be basy, dia ho sarotra raha mbola mihesona anaty vavaka sy « francophonie » foana ihany ny mpitari-tolona handrasany vahoaka.
Raha mbola tsy mijoro ny malagasy ho fantatry izao tontolo izao dia adino eo ihany ô!
Miteny anglisy ny ankamaroany erantany na espagnol…ny teny frantsay manandevo ny malagasy anie dia ho any francophones fotsiny e!
Efa 2013 anie ka sao mbola afaka mivoatra ihany mba hamerenana ny Hasina sy haja ny firenena nopotehiny mpanjanaka taon-jato firy izay ary mety mbola hitohy raha izao hita no tys kapaina hifotony.
23 août 2013 à 7 h 41 min
MILALAO KRIZY MIARAKA @ FOZA NO RA-CELESTIN ,AO ANATY MPANAPOTIKA NY FIRENENA IANAO RAHAIZANY NO MBOLA VOHIZINAO AMPY IZAY .RAHA HILALAO IARAKA @ FOZA DIA FANAMAFISANA SY FANKATOAVANA NY ZAVABITANY ATRIZAY.
Manao ahoana daholo! tena tsy azoko ny mbola nijanon’ireo minisitra, CT, CST ireo ao amin’io fitondrana io vao tsy tao anaty lisitra ny anaran’i neny Lalao Ravalomanana! dia hita mintsy izao fa fitiavambola no misy! tokony tonga dia niala omaly! aminizay mba fantatry ry zareo fa manana ny hazondamosina isika! hiarahitatana haninona ao ? nefa ny tondro zotra efa rava ?
Asa fa tena mahagaga an! izany no tena fihetsika tokony natao voalohany aminizay na ireo communauté internationale ary mba mety ho natahotra izao ilay chissano indray ity no mampitahotra hoe mahazo aminay nareo raha vao manankorontana eo ah!
24 août 2013 à 6 h 00 min
Chere Soeur Representante Samoura ,Cher Frer President Chissanno: c’est l’appuye aux dictateurs par leurs propres confreres et compatriotes que l’Afrique et Madagascar est oppréssée .Apres avoir fait le sale boulot de nettoyer la merde que Rajoelina TGV a fait à Madagascar ,pour ainsi dire TGV vous chie sur la tete en allant en vacances pour ainsi dire retournez maintenant à vos forets et cocotiers et pour moi les vacances à la plage .Le prix Mo Ibrahim sert-il à oppresser l’Afrique ou bien à le devellopper ? Le Pere Pedro postulant au Prix Nobel de la Paix doit bien rire de ce prix !
gena mozambika dit :
Tsipazo ranotay any ny auto anio sisan’alika io
Précédent Article précédent : Liste définitive des candidats : Chissano est là…
Suivant Article suivant : GUY RIVO ANDRIANARISOA : AZA MIONDRIKA, MITRAKA RY MPIARADIA